Thailand, Alemana, Kanada dia mizara maherifo vaovao momba ny fizahantany: Jens Thraenhart, fantatra ihany koa amin'ny Andriamatoa Mekong
Home » Lahatsoratra farany farany » Awards » Thailand, Alemana, Kanada dia mizara maherifo vaovao momba ny fizahantany: Jens Thraenhart, fantatra ihany koa amin'ny Andriamatoa Mekong
Awards • Vaovao Mafana • Hospitality Industry • Vaovao • People • Vaovao Mafana Thailand • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny World Network Network dia fanitarana ny adihevitra momba ny fanarenana.travel manoloana ny areti-mandringana COVID. Ny programa Heroes dia manaiky ny olona maneho faharetana ao anatin'io sehatra io. Ilay mahery fo voalohany amin'ny fizahantany avy any Thailandy dia mpitsoa-ponenana, Andriamatoa Jens Thraenhart.
Thailand dia manana ny maherifon'ny fizahantany voalohany natolotry ny Tambajotra fizahan-tany manerantany.
Jens Thraenhart dia nanaiky ny fanendrena azy hiditra ao amin'ny Hall an'ny Maherifo momba ny fizahantany iraisam-pirenena
Jens Thraenhart dia mizaka ny zom-pirenen'i Alemanina-Kanadiana monina ao amin'ny Fanjakan'i Thailand.
Izy koa dia fantatra amin'ny hoe Andriamatoa Mekong. Jens Thraenhart no mahery fo voalohany amin'ny fizahantany eto Thailand ankehitriny.
Manana traikefa an-taonan'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena, fizahan-tany, ary fandraisana vahiny mandritra ny 25 taona izy, manana toerana amin'ny asa, marketing, fampandrosoana ny orinasa, fitantanana vola miditra, fandrindrana stratejika ary e-orinasa. Tany am-piandohan'ny asa aman-draharahan'ny orinasa Jens dia nohamafisina niaraka tamin'ny fananganana orinasam-pandraharahana ara-tsakafo mahomby, nanangana orinasa Internet fitsangatsanganana an-tserasera amin'ny Internet any New York ary mitantana toeram-pilalaovana golf mahafinaritra tsy miankina any Alemana.
Tamin'ny 2014, Jens Thraenhart dia notendren'ny minisiteran'ny fizahantany any Thailand, Vietnam, Kambodza, Laos, Myanmar, ary China (Yunnan sy Guanxi) hitantana ny Mekong Tourism Coordinating (MTCO) ho talen'ny Executive. tamin'ny taona 2008, niara-nanorina orinasa mpivarotra nomerika China nahazo ny loka Dragon Trail tamin'ny taona 2009 izy, ary nitarika ekipa tetikady marketing sy Internet miaraka amin'ny Vaomieran'ny Fizahan-tany any Kanada sy ny Fairmont Hotels & Resorts. Nanomboka ny taona 1999, izy no CEO an'ny Chameleon Strategies.
Nianatra tao amin'ny Oniversite Cornell niaraka tamin'ny Masters of Management nahazo fankatoavana MBA, ary Bachelor of science avy amin'ny University of Massachusetts, Amherst, ary ny University Center 'Cesar Ritz' ao Brig, Switzerland, Andriamatoa Thraenhart dia nekena ho iray amin'ireo ny kintana miakatra 100 avo indrindra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany nataon'ny Travel Agent Magazine tamin'ny taona 2003, dia voatanisa ho iray amin'ireo sain'ny mpivarotra sy fivarotana haino aman-jery 25 an'ny HSMAI amin'ny fampiantranoana olona sy ny fitsangatsanganana tamin'ny 2004 sy 2005, ary voatendry ho iray amin'ireo sain-tsarimihetsika 20 miavaka hafahafa amin'ny dia eropeana ary Fandraisana vahiny tamin'ny taona 2014. Mpikambana ao amin'ny UNWTO izy, mpikambana ao amin'ny Birao PATA, ary filohan'ny PATA Sina taloha.
Notendren'i Peter Richards avy amin'ny Tourlink Project ho maherifo amin'ny fizahantany izy.
Nanamarina ny nanendrena azy Andriamatoa Richard tamin'ny filazany hoe:
Izaho dia nahalala sy niasa tamina tetik'asa isan-karazany niaraka tamin'i Jens na tsia nandritra ny 10 taona mahery. Manana fahaiza-manao miavaka amin'ny fifandraisana amin'ny olona avy amin'ny sehatra sy ny andraikitra isan-karazany izy, ary manao ny "inclusiveness" ho zavatra azo ampiharina sy azo tsapain-tanana.
Mahafinaritra sy miasa am-pahatsorana koa izy miaraka amin'ireo manamboninahitra, tompon'andraikitra amin'ny indostria ary ONG ifotony; ary mahavita mahita fomba tena izy hanamorana ny fifampitadiavana fifandraisana sy ny fifankahazoana eo amin'ireo vondrona mpiantsehatra ireo, ka hihoatra ny toerana misy ny antipathy (ary manana antagonisma manan-tantara indraindray) ireo mpandray anjara.
Tamin'ny anjara asany tao amin'ny MTCO, Jens dia nahomby hatrany tamin'ny fandresena tamin'ny fizahan-tany tompon'andraikitra amin'ny fizahan-tany maharitra sy ny fizahan-tany maharitra, nitondra fahitana sy tombontsoa ho an'ny SME sy ny vondrom-piarahamonina, ary ny rahona ara-diplaomatika manangana raharaham-barotra mandroso ho an'ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra miankina sy ny tsy miankina.
Ny fifandanjana sy ny fahaizan'i Jen diplaomasia amin'ireo vondrona mpandray anjara dia sarotra tanterahina; ary indrindra sarotra tratrarina am-pahatsorana, ary valiny mivaingana.
Nandritra ny fotoana naha talen'ny birao fandrindrana ny fizahan-tany any Mekong, Jens dia nanolotra hevitra mamorona hatrany, ary nitady ny fandraisana anjara sy ny fiaraha-miasa. Tsy kivy izy rehefa sahirana loatra ny olona hirotsaka ary ampahafantariny anao foana fa misy fotoana sy fotoana hafa foana. Tena aingam-panahy ilay tovolahy, ary mahatonga ny fanamorana sarotra toa tsy misy ezaka. Mendrika ekena izy.
Tsy nisy lobbying ambadik'ity fanendrena ity. Tena avy amin'ny fankasitrahako matihanina ny mpitarika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanovana tsara ny fizahan-tany izany. ”
Ny filohan'ny WTN, Juergen Steinmetz, dia niara-nipetraka tamin'i Jens tao amin'ny Zoom.
Tsy misy sarany velively, ary afaka tendren'olona atolotra www.heroes.travel
September 26, 2021 ao amin'ny 07: 00
Rehefa zaraina amin'ny mpitsidika ireo tantara sy toerana ireo dia lasa lasa antsoina hoe fizahantany lova ara-kolontsaina ity hetsika ity. Fahombiazana sy faharetana amin'ity. Mandritra izany fotoana izany, mpandeha bebe kokoa, manomboka amin'ny boomers ka hatramin'ny millennial dia mitady traikefa vaovao, mandao ny lisitry ny toerana nentim-paharazana hahitana tokana.